သုံးသပ်ချက်များ Keto Diet, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သုံးသပ်ချက်များ Keto Diet
ဘယ်တော့မှထင်ငါသည်ကိုယ်အလေးချိန်အထိ ၇၀ ကီလိုဂရမ်။ ငါ့အလေးချိန်အစဉ်တစ်လျောက်ပတ် ၁၀၀ ကျော်၊ကနှောင့်အယှက်အကြှနျုပျကိုအထိကျွန်မစတင်ဖို့စိတျနှလုံးပြဿနာများရှိသည်။ ငါကြိုးစားခဲ့တောင် Keto Diet မဆုံးရှုံး။ အလေးချိန်ထွက်ခွာ၊နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမခံခဲ့ရ၊အဆန့်ကျင်တွင်၊ငါသည်ပင်ပျော်ရွှင်ပုံမှန်ထက်ထက်!
ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ ၁၃ ကီလိုဂရမ်နှင့်အတူဤတောင်ကိုယ့်အတွက်လအနည်းငယ်။ ကျွန်မအထင်အဆိုပါရလဒ်ကောင်းရှိနေဆဲအများကြီးလုပ်ပြုသောအမှုခံရဖို့၊ဒါပေမယ့်အခါ၊ကိုယ်အလေးချိန်လျင်မြန်စွာကျန်းမာရေးသည်၊ Keto Diet အရာအားလုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့တတ်နှင့်ဆေးတည်ငြိမ်၊ပဲစားရန်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်။
အကောင်းဆုံးဆေးဝါးငါကြိုးစားခဲ့ကြ။ အလေးချိန်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမကြာကြာကြီးထွားလာပေမဲ့၊အခုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုစားသကြားလုံးနဲ့ချောကလက်။ အတူ Keto Diet ငါမှစီမံခန့်ခွဲဆုံးရှုံးထက်ဝက်နီးပါး၊ဤအမှု၌၊အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊နီးပါးမည်သည့်အပြောင်းအလဲအတွက်ကျန်းမာရေး။
ကျွန်တော်သိတော့နည်းနည်းအကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်။ အကြောင်းတောင်ကိုယ့်ကနေလေ့လာသင်ယူအာဟာရ။ ကျွန်တော်ကအပျင်းမပြောနိုင်၊ပေါ်မှာထိုင်အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အားကစားရုံ။ Keto Diet —တစ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောလမ်း၊ငါမှစီမံခန့်ခွဲဆုံးရှုံး ၁၅ ကီလို! ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်သူမည်သူမဆိုသည်ကိုယ့်အကြိုက်!
နှစ်က၊ကိုယ့်နှစ်ပေါင်းရုန်းကန်၏၊ဒါပေမယ့်နေဆဲခဲ့ပုန်းဖို့အတွက်ခပ်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေခဲ့တဲ့အံ့ဖွယ်၊ဒါပေမယ့် Keto Diet ငါကြားပြောလေ၏။ အခုတော့မှန်ထဲမှာမြင်ရတယ်အပိန်နှင့်မင်္ဂလာ!